Villa Somaliya oo qaaday talaabo lagu carqaladeynayo shirka ka socda madaxtooyada. | XAL DOON
Home NEWS Villa Somaliya oo qaaday talaabo lagu carqaladeynayo shirka ka socda madaxtooyada.
Hotelka Royal Palace Ex City Palace ayaa waxaa ka socda qaban qaabada munaasabad lagu dalbanayo inay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod, iyadoo dadweynaha ka qeyb galaya oo u badan haween laga kala keenay 17-ka degmo ee Gobolka Banaadir.
Dadka la isugu keenay hotelka oo aan markii hore loo sheegin ujeedka munaasabadda ayaa markii dambe ka ogaaday boor lagu dhejinayay afaafka hore ee Hoolka Munaasabadda ka dhaceyso, waxaana halku dhigga boorka uu ahaa Waa in Doorasho qof iyo cod dhacdaa, wararka ayaa sheegaya in munaasabadan ay wadaan Maamulka Gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah Xisbiyada muxaafadka ah.
Munaasabadan oo u muuqata banaanbax gudaha hoteel ka dhaceysa waxaa gadaal ka riixeysa oo qarashadadkan bixineysa madaxtooyada Soomaaliya, iyadoo ay u muuqato mid lagu carqaladeynayo shirka madaxtooyada ka socda.